Tuesday January 15, 2019 - 12:38:19 in Wararka by Abdi A.
Hindiya-(Caalami-News)-Xukuumadda waddanka Malaysia oo muddoba ku taamaysay in ay xal u hesho xayiraadda dawladda Hindiya ku soo rogtay Daaciga caanka ah ee Sheekh Zakir Naik oo in muddo ahba ku xanniban Malaysia kadib markii dawladda Hindiya diidday
Hindiya-(Caalami-News)-Xukuumadda waddanka Malaysia oo muddoba ku taamaysay in ay xal u hesho xayiraadda dawladda Hindiya ku soo rogtay Daaciga caanka ah ee Sheekh Zakir Naik oo in muddo ahba ku xanniban Malaysia kadib markii dawladda Hindiya diidday in uu soo galo waddankeeda oo u u dhashay si ay dhaqdhaqaaqiisa dhinaca fidinta diinta u xakamayso ayaa waxa ay ugu dambayn xukuumadda Malaysia ku guul darraysatay dadaalo ay doonaysay in ay xukuumadda Hindiya kaga dhaadhiciso in ay sheekhan caanka ah xayiraadda ka qaaddo oo uu ku laaban karo dalkiisa Hindiya.
Siyaasiga caanka ah ee Anwar Ibrahim oo toddobaadkan booqasho ku tagey India ayaa sheegay in India looga baahan yahay Caddaymo ku filan eedda Sheekha oo degenaansho rasmi ah laga siiyay Malaysia! Kadib markii sannadkii aan soo dhaafnay ee 2018 xukuumadda Hindiya eedaymo culus u soo jeedisay taasi oo keentay in sheekhu in muddo ahba isaga noolaado waddanka Malaysia kadib markii uu ka baqay in haddiiba uu tago waddankiisa isla markaaba xabsiga la dhigo.
Wargeska Foore oo Arrintan wax ka qoray waxa uu intaasi ku darayaa in Wasiirka Xafiiska Raysal Wasaaraha ee dalka Malaysia uu sheegay in Sheekhu Madax banaani buuxda u hayato Muxaadarooyinka uu jeediyo! Balse dhibaato ka haysato in uu tago Hindiya oo ugu hanjabtay xadhig iyo in ay joojiso hawsha daacinimada ah ee uu dalkaasi ka wado.
India ayaa sheekha kusoo oogtey eedo badan oo badankoodu u muuqda inay walaac ku abuurtey kaalinta Sheekhu kaga jiro dad tiro badan oo uu sabab u noqday inay Islaamaan!
Wadaadada diimaha Siigga iyo Hinduuga ee dalka Hindiya ayaa walaac muddoba ka qabay sida uu sheekh Zakir Naik ugu guubaabiyo in ay soo islaamaan taasina keentay in dad badani gacantiisa ku soo islaamaan.
Sheekh Zakir Naik ayaa safka hore kaga jira culimada islaamka ah ee daacinimada ku hawl gala isaga oo dalal badan oo adduunka ah ka jeediya khudbado la xidhiidha dhinaca dacwadda islaamka waxaana sannad walba gacantiisa gaar ahaan dalka Hindiya ku soo islaama boqollaal qof.
Dadaalka xukuumadda Malaysia ayaa u muuqda mid adag oo ay doonayso in ay xal ugu hesho xaaladda sheekhan caanka ah waxaanay doonayaan in ay ku dhexdhexaadiyaan dawladda Hindiya oo u muuqata mid dadaalka sheekha ee dhinaca diin fidintu uu culays weyn ku hayo. Waxaanay mar kale xukuumadda Malaysia doonaysaa in ay Ra’iisal Wasaaraha Hindiya kala hadasho sidii Sheekh Zakir Naik uu si xor ah hawshiisa uga dhex wadan lahaa Hindiya iyo meel kasta oo dunida ah una sii wato dadaalkiisa diin fidinta la xidhiidha.